NewsOpinionBusinessArts & CultureEducationMultimediaSpecial ReportsIn The Paperzapirothoughtleader NationalAfricaWorldEnvironmentSportSci - TechHealthAmabhungane Topics Zimbabwe crisis ‹ First < 4 5 6 7 8 > Last ›
ZSE restarts, trades in US dollars19 Feb 2009 13:58 - Nelson BanyaThe Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) restarted after a three-month halt on Thursday and trades were in United States dollars for the first time.
'We have to get Zimbabwe working again'19 Feb 2009 06:58 - Staff ReporterZimbabwe's government took its first step towards rebuilding the nation on Wednesday, honouring a pledge to civil servants to pay them in US dollars.
Zim court extends detention of MDC's Bennett18 Feb 2009 17:52 - Staff ReporterA Zimbabwe court on Wednesday ordered ministerial nominee Roy Bennett to be kept in custody until March 4.
Britain offers a home to elderly subjects in Zim18 Feb 2009 15:04 - Staff ReporterA few hundred elderly Britons living in Zimbabwe are being offered resettlement back home to protect them from worsening conditions.
MDC's Bennett formally charged over alleged terror plot17 Feb 2009 16:32 - Staff ReporterA Zimbabwe politician earmarked to join the new unity government appeared in court on Tuesday to face charges over an alleged terror plot.
MSF: Zim cholera crisis deteriorates17 Feb 2009 15:37 - Staff ReporterThe Zimbabwe cholera epidemic, which has now claimed about 3�400 lives, is only part of the country's public health crisis, MSF said on Tuesday.
Zim's stock exchange fails to resume trading17 Feb 2009 12:14 - Staff ReporterZimbabwe's stock exchange (ZSE) has failed to resume trading, the state-controlled Herald newspaper reported on Tuesday.
Zimbabwe unity overshadowed by court case17 Feb 2009 09:35 - Staff ReporterZimbabwe's new unity government began the task of rebuilding the shattered country on Monday but its first day was marred by confusion over terrorism
Zim's MDC undecided on response to arrest16 Feb 2009 17:16 - Philimon BulawayoZimbabwe's MDC may be reluctant to quit the new unity government, despite the arrest of one of its senior officials, a top party official has said.
MDC's Bennett charged with 'banditry, sabotage'15 Feb 2009 10:46 - Staff ReporterThe treason charges against ministerial nominee Roy Bennett have been dropped and replaced with attempt to commit terrorism, banditry and sabotage.
'Zanu-PF not ready to work with anyone'14 Feb 2009 18:04 - Staff ReporterZimbabwe's new finance minister said on Saturday a top opposition figure's arrest showed Mugabe's party was not ready to work with its former rivals.
Ditches full of risky riches16 Feb 2009 06:00 - Mgcini NyoniMgcini Nyoni spends a hazardous and illegal night in the diamond fields of Chiyadzwa in eastern Zimbabwe.
Arrest casts shadow over Zim Cabinet swearing-in13 Feb 2009 16:52 - Staff ReporterA top MDC official was arrested on Friday, just an hour before a Zimbabwe unity government was sworn in.
Zim land seized -- despite unity government13 Feb 2009 16:15 - Jason MoyoLand seizures continue in Zimbabwe despite this week's formation of a new unity government.
Zimbabwe's MDC says senior official arrested13 Feb 2009 15:09 - Staff ReporterZimbabwean security agents arrested a senior leader of the MDC on Friday ahead of a swearing-in ceremony for a new Cabinet, a party official said.
How did it come to this?13 Feb 2009 07:21 - Chris McGrealMore than two-thirds of Zimbabwe's population needs food aid, many are dying of hunger and this year's harvest will be the worst in decades.
Tsvangirai prepares to swear in Cabinet12 Feb 2009 14:23 - Staff ReporterZimbabwe's new Prime Minister, Morgan Tsvangirai, set to work on Thursday to bring his top aides into Cabinet posts.
New PM Tsvangirai vows to rebuild Zimbabwe11 Feb 2009 17:10 - Staff ReporterMorgan Tsvangirai vowed to rebuild Zimbabwe's shattered economy and end political violence as he became prime minister on Wednesday.
New era for Zim as Tsvangirai sworn in as PM11 Feb 2009 12:26 - Staff ReporterMorgan Tsvangirai was sworn in as prime minister of Zimbabwe on Wednesday, joining Robert Mugabe in a unity government.
Zim 'not planning to adopt rand'10 Feb 2009 10:02 - Staff ReporterZimbabwe is not planning to adopt the rand, Business Report said on Tuesday, citing the country's central bank.